Ahoana ny fomba hampihenan'ny dihy ny fihenjanana sy ny fahatsapana ho manirery mandritra ny fialantsasatra | Fred Astaire
Fred Astaire Dance Studios - FAMPIANARANA FIANARANA Vaovao
Fampianarana ho an'ny mpianatra vaovao
Tombony azo amin'ny dihy
4 andry dihy
Fampianarana lesona momba ny dihy
Lesona amin'ny Internet
Lesona ho an'ny ankizy sy ny tanora
Lesona Para Dance
Fa maninona no FADS?
Filankevitry ny dihy Int'l
Andriamatoa Fred Astaire
Vaovao sy gazety
Loharano ho an'ny haino aman-jery
Hetsika saron-tava an-tapitrisany ™
Blog momba ny dihy
Sehatra lesona amin'ny Internet
Fampahalalana momba ny lesona an-tserasera
Lesona mivantana mivantana
Rafitra amboara amin'ny Internet
Ahoana ny fomba hampihenan'ny dihy ny fihenjanana sy ny fanirery mandritra ny fialantsasatra
Betsaka amin'ny mpianatsika no milaza amintsika fa mihevitra ny studio Fred Dance Astaire azy ireo ho lavitra trano izy ireo ary fianakaviana. Ireo dia olona manana fahalianana iraisana - fitiavana dihy - izay nahita fifankatiavana marina ihany koa, fivoahana mahafinaritra ho an'ny fahaiza-mamorona, ary fahatsapana fahombiazana rehefa mahazo aina sy matoky tena eo amin'ny sehatry ny dihy izy ireo. Tena reharehanay ny “FADS vondrom-piarahamonina” novolavolain'ireo mpampianatra mpampianatra sy dihy manan-talenta rehetra mba hanampy amin'izany! Ny tambajotranay Dance Studios dia tompon'andraikitra ary olona manana fahaiza-manao sy tsara ary be fiahiana izay tena manolo-tena hanampy ny mpianatr'izy ireo hahatratra (sy hihoatra!) Ny tanjon'izy ireo amin'ny dihy. Iray amin'ireo zavatra mahatonga ny fiaraha-miasa amin'i Fred Astaire Dance Studios tsy manam-paharoa sy manokana.
Io fahatsapana ny "FADS fianakaviana" io dia misy mandritra ny taona, fa vao mainka koa mandritra ny fialantsasatra. Satria mahafinaritra araka ny maha-izy azy ireo, fantatray fa ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra dia mety hampiady saina ny sasany ihany, na inona na inona antony. Araka ny healthline.com, "Ny fihenjanana sy ny tebiteby mandritra ny volana Novambra sy Desambra dia mety hiteraka fanirery na dia ireo izay mazàna matetika aza." Ny antony mahatonga ny alahelo na fikorontanana ara-pihetseham-po mandritra ny fialantsasatra dia betsaka, hoy ny healthline.com, manonona fitokanana ara-tsosialy (afaka manampy an'izany isika!), Ny alahelo alahelo ny havan-tiana, ary ny tsindry amin'ny fialantsasatra ankapobeny (tonga ao an-tsaina ny fiantsenana tsy misy farany). Ka raha sendra izany koa tampoka ianao dia fantaro fa tsy irery ianao. Ary fantaro fa afaka miantehitra amin'ny fianakavian'i Fred Astaire Dance Studios ianao hanampy anao handray, raha kivy ianao.
Ny dihy - zavatra azonao entina miaraka aminao na aiza na aiza alehanao - dia mpandefitra sy fanatanjahan-tena tsara, ary ahafahanao mifantoka tanteraka amin'ilay fotoana - amin'ny vatanao manokana sy ny gadona, ary avelao hihena ny tontolo sisa. Ka amin'ireny fety fialantsasatra sy fiaraha-mikorana ireny amin'ity vanim-potoana ity, araraoty ireo fotoana ireo hivoahana amin'io sehatra fandihizana io! Tadidio fa be dia be izany tombony voaporofo amin'ny dihy - ara-batana, ara-pientanam-po ary ara-tsosialy. Ary tadidio fa Fred Astaire Dance Studios dia toerana manohana sy manome aingam-panahy izay ahafahan'ny mpampianatra sy ny namana manampy anao hahita ny hafaliana amin'ny dihy, mandritra ny fotoananao miasa mandritra ny adin-tsainao. Tsy afaka mampanantena fanasitranana maizina ho an'ny manga isika. Saingy mampanantena ny firaisan-kina isika, tontolo iainana mafana, manentana ny saina ary 100%, ary ny fotoana hanaovana soa ho anao - ara-batana, ara-pientanam-po ary ara-piaraha-monina.
Diniho ny fialantsasatra amin'ny fotoana mety - tsy hoe misy ratsy mihitsy - mba handray lesona amin'ny dihy fandihizana ao amin'ny Fred Astaire Dance Studios - hamahana izany. IZAO no fotoana tokony hanaovanao zavatra manan-danja, ho anao irery ihany. Na hanome fanomezana lesona amin'ny dihy ho an'ny olon-tianao, ary hiaraka amin'izy ireo amin'ny dia dihy iraisana izay afaka handamina ny fifandraisanareo. Na mahita fotsiny ny fahalalahana mandihy amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity… mandihiza amin'ny fandaozana, dihy toy ny tsy misy mijery (satria tsy izy ireo), mandihiza fotsiny satria mahafaly anao izany. Satria misy fahasambarana betsaka ho hita - mila mijery fotsiny amin'ny toerana mety ianao. Manomboha anio ao amin'ny Fred Astaire Dance Studios - tsy afaka miandry handihy miaraka aminao izahay!
Makà tolotra fampidirana
Ampio izahay hahita ireo studio eo akaikinao! Ireo toerana akaiky anay dia haseho amin'ny pejy valin'ny karoka.
* manondro saha takiana